Asa ratsy tany Toamasina :: Nogadraina ilay miaramila tratra nanendaka • AoRaha
Asa ratsy tany Toamasina Nogadraina ilay miaramila tratra nanendaka
Voatazona am-ponja vonjimaika rehefa avy natolotra ny Fampanoavana, tamin’ny sabotsy lasa teo, ny miaramila iray voalaza fa tratra nanendaka, tany Valpinson Toamasina, tamin’ny herinandro lasa teo.
Miaramila kaporaly am-perin’asa ity mpitandro ny filaminana voarohirohy ity, araka ny tatitra avy amin’ny polisy nanao ny fanadihadiana. Nandroba vehivavy iray nody hariva, tany Valpinson Toamasina izy sy ny namany vitsivitsy, tamin’ny harivan’ny alarobia 7 aogositra lasa teo.
«Nanohitra sy niantso vonjy ilay vehivavy voaendaka. Tonga nanavotra azy ny fokonolona teo amin’ny manodidina. Nandositra ireo mpanendaka. Tafajanona teo kosa ny iray tamin’izy ireo ka noraisim-potsiny. Nenti-katezerana ny olona izay nikasa hidaroka azy. Tonga ara-potoana anefa ny polisy », araka ny fanazavana avy amin’ny mpanao famotorana.
Nentina tany amin’ny biraon’ny Kaomisaria hatao famotorana ilay voasambotra. Fantatra avy eo ny mombamomba an’itsy farany. «Nahatrarana basy poleta iray feno bala teny amin’io lehilahy io. Tamin’ny fanadihadiana no nahafantarana fa miaramila am-perin’asa izy. Nahitana môtô sy karatra ana polisy iray voaroba, iray volana lasa izay, tao an-tranony», hoy ihany ny polisy.
Voina teny Manakambahiny Tovolahy, 18 taona, maty nianjera tao anatin’ny tevana
Voina tamin’ny hain-trano :: Hofotoran’ny polisy ny havan’ireo efa-mianaka niara-maty